रक्षामन्त्री जेम्सले चाँडै राजीनामा दिदैछन् ! – जनदिशा
Tag: रक्षामन्त्री जेम्सले चाँडै राजीनामा दिदैछन् !
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको संकेतः रक्षामन्त्री जेम्सले चाँडै राजीनामा दिदैछन् !
janadisha October 15, 2018	No Comments रक्षामन्त्री जेम्सले चाँडै राजीनामा दिदैछन् !
सरद, काठमाडौं, २९ असोज । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका अनुसार रक्षामन्त्री जेम्स म्याटिसले राजीनामा दिनसक्नेछन् । गत आइतबार राष्ट्रपति ट्रम्पले एक अन्तरवार्तामा रक्षामन्त्री जेम्सलाई डेमोक्रेटिक तवरको बताउँदै राजीनामा दिनसक्ने बताका छन् । आइतबार प्रशारण भएको सीबीएसको कार्यक्रम ‘६० मिनट’ मा रक्षामन्त्री जेम्सले आफ्नो पदबाट राजीनामा देओस् भनेर चाहनुहुन्छ ? भन्ने…
View More राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको संकेतः रक्षामन्त्री जेम्सले चाँडै राजीनामा दिदैछन् !